Antanimora : 19 ny voafonja mamita sazy mandra-pahafatiny | NewsMada
Antanimora : 19 ny voafonja mamita sazy mandra-pahafatiny
19 ny isan’ny voafonja mamita sazy mandra-pahafatiny eny amin’ny fonjan’Antanimora amin’izao fotoana izao. 15 lehilahy, dimy kosa ny vehivavy amin’izy ireo, araka ny fanazavan’ny mpitantana voalohany ny fonja, Rakotonandrianina Olivier omaly, teny Antanimora. 2 933 ny voafonja rehetra, 2 366 lehilahy, 238 vehivavy, 130 ny tsy ampy taona zazalahy, 16 kosa ny ankizivavy, 168 ireo voafonja mamita asa ivelan’ny toeram-pihazonana, 15 tsaboina eny amin’ny hopitaly noho ny aretina. 35% amin’ny voafonja rehetra no efa voatsara fa ny ambiny mbola miandry ny fitsarana avokoa. Nangataka ny mba hanafainganana ny fitsarana sy fijerena ny antontan-taratasy momba azy ireo ny voafonja vehivavy fa lany eny ny fahatanorany, hoy ny nambaran’ny solontenan’izy ireo, omaly.
Ankoatra ny tsy fisian’ny fiarabe hitaterana ny voafonja hotsaraina eny amin’ny tribonaly Anosy, olana koa ny fahateren’ny trano izay hita fa tena antitra tanteraka. Afaka dimy taona any ho any, mety hirodana ho azy ny fotodrafitrasa satria tsy nisy fanamboarana mihitsy tao anatin’ny 56 taona nijoroany. « Zava-doza ny vokatr’izany eo amin’ny fandriampahaleman’ny tanàna », hoy ny tomponandraikitry ny fonja ihany.
Dimy ny vehivavy miditra eny am-ponja isan’andro (ankoatra ny alahady) raha 27 ny lehilahy vokatry ny fandikan-dalàna samihafa.
Nahazo sakafo ny voafonja rehetra
Ho fanamarihana ny Andron’ny vehivavy, nanolotra vary sy voamaina ho an’ny vehivavy sy lehilahy voafonja ny vadin’ny filoha, omaly teny Antanimora. Vary 20 gony, voamaina enina gony hatao sakafo, miampy fahatsiarovana ho an’ny vehivavy 33 miandraikitra ny toerana ho an’ny vehivavy mamita sazy eny am-ponja.